သီတဂူဆရာတော်ကြီး၏ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့တွင် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများသို့ ဩဝါဒသဝဏ်လွှာ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home ဆောင်းပါးကဏ္ဍ သီတဂူဆရာတော်ကြီး၏ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့တွင် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများသို့ ဩဝါဒသဝဏ်လွှာ
“သီတဂူဆရာတောြ အငြျဂလိပဘြာသာဖှင့ဟြောကှားအပသြောတရား မှနမြာဘာသာပှနြ”
ဘဝတု သဗ်ဗမငျ်ဂလံ ကကွသြရမငြျေဂလာအပေါငြးနှင့ြ အမှဲထာဝရ ပှည့စြုံကှပါစေ။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတောြ တို့၏ တနခြိုးတဇေောြ အာနုဘောတြို့ကှောင့ြ ဤ ကှီးကယွမြှင့မြှတတြဲ့ အခါသမယ ဖှဈတဲ့ ကဆုနလြပှည့ြ ဗုဒျဓနေ့မှာ ကမျဘာသူ ကမျဘာသားတှကေို ဩဝါဒသဝဏလြှှာစကား မိန့ကြှားခငွပြါတယြ။
ငါတို့ရဲ့ မှတဗြုဒျဓဟာ ယရှေု ခရဈတောထြကြ နှဈပေါငြး ၆၂၃ စောပှီး မှေးဖှားခဲ့တယြ။ သကတြောြ ၃၅ နှဈအရှယမြှာ သူဟာ စိတအြညဈအကှေးအားလုံး၊ ကိလသောအားလုံးကို ဖယရြှားနိုငခြဲ့တယြ။ သဈစာလေးပါးကို ထိုးထှငြးသိမှငတြောမြူခဲ့တယြ။ သဗျဗညုတဉာဏတြောကြို ရရှိတောမြူခဲ့တယြ။ ဗုဒျဓ စငစြဈ ဖှဈတောမြူခဲ့တယြ။
ဘီစီ ၅၄၃ ခုနှဈ၊ သကတြောြ ၈၀ အရှယမြှာ ပရိနိဗျဗာနဝြငစြံတောမြူခဲ့တယြ။ ၄၅ နှဈပတလြုံး ဗုဒျဓအဖှဈ နတေောမြူခဲ့တယြ။ ၄၅ နှဈအတှငြး သူ ဘာတှေ ဟောပှောခဲ့သလဲ? ဓမျမကိုသာ သူ ဟောခဲ့တယြ။ ဓမျမဆိုတာ ဘာသာရေးအယူဝါဒ မဟုတသြလို အခှား အယူဝါဒ တဈမွိုးမွိုးလဲ မဟုတပြါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဓမျမ ဆိုတာ ငါတို့ကိုယထြဲမှာ တကယ့သြဘာဝအရှိတရား သဘာဝအမှနတြရားကို ငါတို့ ဘယလြိုရှာရမယဆြိုတဲ့ နညြးပညာ တဈခုဘဲ။
ငါတို့ကိုယထြဲမှာ သဘာဝအမှနတြရားကို ရှာဖှလေို့ မတှေ့သေးသမွှကာလပတလြုံး ဘဝရဲ့ မညသြည့ပြှူနာကိုမွှ ဖှရှငြေးနိုငမြှာ မဟုတဘြူး။
ဒီ တရားဒသနောတှထေဲမှာ ဗုဒျဓမှတစြှာက “ဝမြးနညြးပူဆှေးခှငြး ဆငြးရဲဒုကျခရောကခြှငြး၊ ပှီးတော့ ရောဂါဝဒနောဖှဈရခှငြး၊ အစာရစော ရှားပါးခှငြး၊ တိုကကြှ ခိုကကြှ သတဖြှတကြှခှငြး စသညတြို့ရဲ့ မူလ ဇာဈမှဈတှေ”ကို ဟောပှခဲ့တယြ။
လောဘ = လိုခငွတြပမြကမြှု ဆိုတာ အစာရစော ရှားပါးပှတလြပခြှငြး၊ ဆာလောငမြှတသြိပခြှငြးတို့ရဲ့ မူလဇာဈမှဈ ဖှဈတယြ။
ဒေါသ ဆိုတာ တိုကကြှ ခိုကကြှ သတဖြှတကြှခှငြးတို့ရဲ့ မူလဇာဈမှဈ ဖှဈတယြ။
မောဟ ဆိုတာ ရောဂါဝဒနောဖှဈရခှငြးရဲ့ မူလဇာဈမှဈ ဖှဈတယြ။
လောဘုူဒါယ ပဇာယ ဒုဗျဘိကျခနျတရကပျပေါ ဟောတိ။
လိုခငွတြပမြကမြှု လောဘတှေ မွားသထကမြွား၊ တိုးသထကြ တိုးလာရငြ ကမျဘာ့လူသားတှဟော ဆာလောငမြှတသြိပမြှု၊ အစာရစော ရှားပါးပှတလြပမြှု ဒုဗျဘိကျခနျတရကပကြို ရငဆြိုငရြကောငြး ရငဆြိုငရြလိမ့မြယြ။
ဤကမျဘာကှီးမှာ ဒေါသ = မုနြးတီးမှုတှေ ပိုပိုပှီး မွားလာမယြ ပှန့လြာမယဆြိုရငြ အဲဒီ ဒေါသကှောင့ြ ဤကမျဘာမှပေေါမြှာ ရှိကှတဲ့လူသားတှဟော တိုကခြိုကကြှတယြ။ သတဖြှတကြှတယြ။ တိုကပြှဲတှေ ဖှဈပေါလြာကှလိမ့မြယြ။
မောဟ= တှဝမေေိုကမြဲခှငြး = နမောနြမဲ့နိုငခြှငြးတှဟော ရောဂါဝဒနောတှေ ဖှဈရခှငြး မူလအကှောငြးတရားတှေ ပါပဲ။
ယခုအခါ ကိုရိုနာဗိုငြးရပဈြရောဂါဟာ ကမျဘာတဝှမြးမှာ ပွံ့နှံ့နပေါတယြ။ ၎င်းငျးငြးရဲ့ မူလဇာဈမှဈကတော့ အသိပညာမဲ့ခှငြး၊ မိုကမြဲခှငြး၊ နမောနြမဲ့နိုငခြှငြးဘဲ ဖှဈပါတယြ။
မှတစြှာဘုရားက သူ့ရဲ့ ဓမျမဒသနောမှာ ဒါတှကေို ရှငြးလငြးဖေါပြှပှီး ဖှဈပါတယြ။
ငါတို့ဟာ ရောဂါဝဒနောတှကနေေ လှတမြှောကခြငွတြယြ ဆိုရငြ
နမောနမဲ့နိုငမြှုတှကေို ငါတို့ လွော့ခရွမယြ။
ငါတို့ဟာ တိုကပြှဲတှေ၊ သတဖြှတခြှငြးတှကနေေ လှတမြှောကခြငွတြယဆြိုရငြ ငါတို့ရဲ့ ဒေါသကို လွှော့ခပွဈရမယြ၊ ထိနြးခွုပရြမယြ။
ငါတို့ဟာ ဆာလောငမြှတသြိပမြှု၊ အစာရစော ရှားပါးပှတလြပမြှုတှကနေေ လှတမြှောကခြငွတြယဆြိုရငြ ငါတို့ရဲ့ မတောလြောဘ၊ လိုခငွမြကမြောမှုတှကေို ထိနြးခွုပရြမယြ။
မှတစြှာဘုရား အဆုံးအမ သာသနာမှာ ရှငြးရှငြးလငြးလငြး ဖောပြှထားတယြ။ လောဘ ဒေါသ မောဟ ဆိုတဲ့ ဒီ သုံးပါးဟာ ဒီကမျဘာမှာ ဆငြးရဲဒုကျခရောကရြတာတှေ၊ ဝမြးနညြးပူဆှေးရတာတှေ၊ စိုးရိမထြိနလြန့ရြတာတှရေဲ့ မူလဇာဈမှဈတှေ ဖှဈပါတယြ။
ဒါကှောင့ြ ဦးစှာပထမ မတျေတာတရား၊ ကရုဏာတရားမွား ပှါးမွားခငွပြါတယြ။
ဒုက်ခပ်ပတ်တာ စ နိဒ်ဒုက်ခာ၊
ဘယပ်ပတ်တာ စ နိဗ်ဘယာ၊
သောကပျပတျတာ စ နိူောကာ၊
ဟောနျတု သဗျဗပေိ ပါဏိနော၊
ဒုက်ခပ်ပတ်တာ စ နိဒ်ဒုက်ခာ
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတောတြို့၏ ဘုနြးတနခြိုးတဇေောြ အာနုဘောတြို့ကှောင့ြ ဆငြးရဲဒုကျခရောကနြကှသေူအားလုံး ဆငြးရဲဒုကျခမှ လှတမြှောကကြှပါစေ။
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတောတြို့၏ ဘုနြးတနခြိုးတဇေောအြာနုဘောတြို့ကှောင့ြ ဝမြးနညြးပူဆှေး ဆငြးရဲဒုကျခရောကနြကှသေူ အားလုံး ဝမြးနညြးပူဆှေး ဆငြးရဲဒုကျခမှ လှတမြှောကကြှပါစေ။
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတောတြို့၏ ဘုနြးတနခြိုးတဇေောအြာနုဘောတြို့ကှောင့ြ ဘေးအနျတရာယနြှင့ြ တှေ့ကှုံနကှရေသူအားလုံး ဘေးအနျတရာယအြပေါငြးမှ လှတမြှောကကြှပါစေ။
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတောတြို့၏ ဘုနြးတနခြိုးတဇေောအြာနုဘောတြို့ကှောင့ြ ဝမြးနညြးပူဆှေး ဆငြးရဲဒုကျခရောကနြကှသေူအားလုံး၊ ဘေးအနျတရာယနြှင့ြ တှေ့ကှုံနကှရေသူအားလုံး၊ ရောဂါမွားနှင့ြ တှေ့ကှုံနရသေူအားလုံး ထိုဘေးဒုကျခမွိုးစုံ၊ ရောဂါမွိုးစုံမှ လှတမြှောကကြှပါစေ။
ဒါကတော့ ဘုနြးကှီးရဲ့ ဦးစှာပထမ မတျေတာသဝဏလြှှာပါ။ ကမျဘာတဝှမြး ဒီ (COVID-19) ရောဂါဝဒနောခံစားနရသေူအားလုံးဆီကို ပို့တာပါ။
ဗုဒျဓဘာသာဝငြ ညီအဈကိုမောငနြှမ အားလုံးကို တိုကတြှနြးခငွပြါတယြ။
နှဈပေါငြး ၄၅ နှဈအတှငြး မှတစြှာဘုရား ဟောကှားခဲ့တဲ့ ဒီတရားဓမျမတှေ၊ ဒီကမျဘာပေါမြှာ ဒီတရားဓမျမတှေ တညရြှိနသမွှေကာလပတလြုံး မှတစြှာဘုရား သကတြောထြငရြှား ရှိနသေေးတယလြို့ မှတယြူလေးစားရမယြ။
တရားဓမျမ ဆိုတာ ငါတို့ရဲ့ ဆရာ၊ ငါတို့ရဲ့ နညြးပှ ဘဲ။
ဒါကှောင့ြ ဓမျမ ညီအဈကိုမောငနြှမမွား – ဓမျမကိုထိနြးသိမြးစောင့ရြှောကဖြို့၊ ထာဝရတညတြံ့စဖေို့၊ သကတြမြးရှညကြှာစှာ တညရြှိနဖေို့၊ ငါတို့ ဓမျမကို သငယြူနသငေ့တြယြ။ ဓမျမကို ကငွ့နြသငေ့တြယြ။
ဓမျမ ကို သငယြူနသမွှေ ကငွ့နြသမွှေကာလပတလြုံး ငါတို့ရဲ့ ဆရာ မှတစြှာဘုရားဟာ သကတြောထြငရြှားရှိနတယြေ။
ဗုဒျဓဘာသာဝငမြွားက ဓမျမကို ငါတို့ရဲ့ ဆရာ မှတစြှာဘုရားအနနေဲ့ ရိုသလေေးစားကှတယြ။ အထှဋအြမှတထြားကှတယြ။
ဓမျမကို ထိနြးသိမြးဖို့၊ စောင့ရြှောကဖြို့၊ ကာကှယဖြို့၊ အနှောကအြယှကကြို ဟန့တြားဖို့ ဖှဈတယြ။ ဒီကမျဘာပေါမြှာ ဒီဓမျမ သကတြမြးရှညကြှာဖို့၊ ကှာကှာ တညတြံ့နဖေို့အတှကြ စနဈတကွ သငယြူလေ့လာမှုဟာ အငမြတနြ အရေးကှီးပါတယြ။
ယခု ကမျဘာတဝှမြးမှာ ဗုဒျဓဘာသာစငတြာတှေ အမွားကှီးရှိပါတယြ။ ဗုဒျဓဘာသာ ညီအဈကိုမောငနြှမမွားကို တိုကတြှနြးအားပေးခငွပြါတယြ။
ငါတို့ ပှည့ပြှည့စြုံစုံနဲ့ အသေးစိတြ သငယြူလေ့လာသင့တြယြ။
အပေါယြံကှော ဖှဈတဲ့ အတှေးအခေါအြယူအဆမှနသြမွှ၊ မညသြည့အြရာကိုမွှ ပိဋကစာပထေဲကို အသဈ ပေါငြးမထည့ပြါနဲ့၊ မှတစြှာဘုရားဟောထားတဲ့ မူရငြးတရားဓမျမတှေ၊ လမြးညှှနခြကွတြှထေဲက ဘာတဈခုကိုမွှ ဖယရြှားမပဈပါနဲ့၊ ခတြစေနဈ အသဈပုံစံမွိုး နဲ့ ဘာကိုမွှ ပှောငြးမပဈပါနဲ့၊ ဘာကိုမွှ အသဈပှနြ မရေးပါနဲ့၊ မှတစြှာဘုရားကိုယတြောတြိုငြ ဟောကှားထားတဲ့အတိုငြး ငါတို့ လေ့လာသငယြူသင့တြယြ။
အတှေးအခေါြ အယူအဆ အသဈတှေ ဘာမွှ ဖှည့စြှကြ မထည့ပြါနဲ့။ မူရငြး ဒသနောတှကေို ဘာတဈခုမွှ ဖယရြှား မပဈပါနဲ့။ အသဈပုံစံမွိုးနဲ့လညြး ပှနပြှငြ မရေးပါနဲ့။
မှတစြှာဘုရားရဲ့ မူရငြးတရားဒသနောတောအြတိုငြး ငါတို့တတှေ လေ့လာသငယြူသင့တြယြ။ ကငွ့ကြှံအားထုတသြင့တြယြ။ လေ့ကငွ့သြငကြှားပေးသင့တြယြ။
ဒါလိုလုပခြှငြးဟာ ဓမျမကို ထိနြးသိမြးရာ ရောကတြယြ။
ဒါလိုလုပခြှငြးဟာ ဓမျမကို ကာကှယရြာ ရောကတြယြ။
ဒါလိုလုပခြှငြးဟာ ဓမျမကို စောင့ရြှောကရြာ ရောကတြယြ။
ဗုဒျဓသာသနာတောြ ၂၅၆၄ နှဈ ဒီ နှဈပတလြညြ နေ့ မှာ ဗုဒျဓနေ့ (ကဆုနလြပှည့နြေ့) ကို အထိမြးအမှတပြှု ဂုဏယြူပူဇောကြှမယ့ြ ဝိသာခါပုဏျဏိမာ ပှဲ ရှိတယြ။ မှတဗြုဒျဓကို ဒီ ထူးခှားတဲ့ ဝိသာခါပုဏျဏိမာ နေ့မှာ မှေးဖှားခဲ့တယြ။ မှတဗြုဒျဓက ဝိသာခါပုဏျဏိမာနေ့မှာ သဗျဗညုတဉာဏြ ရရှိတောမြူခဲ့တယြ။ ဘုရားအဖှဈကို ရောကရြှိတောမြူခဲ့တယြ။ ဒီ ထူးခှားတဲ့ ဝိသာခါပုဏျဏိမာ နေ့မှာပဲ မှတဗြုဒျဓ ပရိနိဗျဗာနဝြငစြံတောမြူခဲ့တယြ။
ဒါတှဟော ဒီလို ထူးခှားတဲ့ ဝိသာခါပုဏျဏိမာ ဆိုတဲ့ လပှည့နြေ့မှာ ဖှဈခဲ့ကှတာ။ ဒါကှောင့ြ ဒီနေ့ဟာ မှတဗြုဒျဓရဲ့ နေ့ထူးနေ့မှတသြုံးမွိုးရတဲ့ နေ့ ဖှဈပါတယြ။ မှတဗြုဒျဓရဲ့ နေ့ထူးနေ့မှတကြို အထိမြးအမှတပြှု ဂုဏယြူပူဇောကြှပါ လို့ ဆိုတဲ့ သဝဏလြှှာကို ကမျဘာတဝှမြးမှာ ရှိကှတဲ့ ဗုဒျဓဘာသာဝငြ ညီအဈကိုမောငနြှမမွားကို ပေးခငွပြါတယြ။
နိဂုံးခွုပအြားဖှင့ြ မှတဗြုဒျဓရဲ့ နောကဆြုံးစကားကို ရှတဆြိုခှငြးဖှင့ြ အသိပညာ မွှဝပေေးခငွပြါတယြ။
ဟနျဒ ဒါနိ ဘိကျခဝေ အာမနျတယာမိ ဝေါ၊ ဝယဓမျမာ သငြျခါရာ၊ အပျပမာဒနေ သမျပာဒထေ။
ဟနျဒ= ဟငြ ပငပြနြးလစှတေကား၊ အခု နောကဆြုံးစကားအနနေဲ့ သငတြို့ကို ငါဘုရား ပှောပါရစေ။
ဝယဓမျမာ သငြျခါရာ = အစုအဝေးနဲ့ ဖှဈနကှတေဲ့၊ ပှုပှငစြီမံခံရတဲ့ သဘောတရားတှဟော အဆကမြပှတြ ဖှဈနကှတေယြ။ ပကွနြကှတေယြ။
အပျပမာဒနေ သမျပာဒထေ = ဒါကှောင့ြ မိမိတို့ရဲ့ အလုပကြိဈစကို ပှီးပှည့စြုံအောငြ ငါတို့ရဲ့ အလုပကြိဈစဆိုတာ ဘာလဲ?
သီလ သမာဓိ ပညာနှင့ြ လုံးဝဥူုံ ပှီးပှည့စြုံအောငြ၊ ပှုပှငစြီမံခံနရတေဲ့ သငြျခါရသဘောတရားတှကေို သတိနဲ့ ဂရုတစိုကြ ကှည့နြရမေယြ။
၁၃၈၂ ခုနှဈ၊ ကဆုနလြပှည့နြေ့
ဘာသာပှနြ – Ashin Kumara
#သီတဂူ #sitagu #ကဆုနလြပှည့နြေ့
#ဝိသာခါပုဏ်ဏိမာ #ဗုဒ်ဓနေ့ #VesakDay
သီတဂူစနြးလပမာ ခမွြးမှသာယာ ရှိကှပါစေ။
Posted by သီတဂူသတငြး
🎥 – သီတဂူထိနလြငြးဦး
Previous articleCOVID-19 ကူးစက်မှု (၁) ခု ထပ်မံအတည်ပြု ကူးစက်မှုပေါင်း (၁၆၂) မှု ရှိလာ
Next articleNBC သတင်းဌာန လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောက်ယှက်မှု စွပ်စွဲချက် နယူးယောက် ရှေ့နေချုပ်ရုံး စတင်စစ်ဆေး